We.com.mm - အေးသောင်းရဲ့ တစ်ကျော့ပြန်အနုပညာလမ်းခရီး
သူ့ရဲ့ဝတ်ဆင်ပုံ ဟန်ပန်အမူအရာတွေက ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုံးကကြည့်ခဲ့ရတဲ့ မြန်မာဗွီဒီယိုကားတွေထဲကလိုမဟုတ်တော့ဘူး …။
မှတ်မိသလောက် နိုင်တီးဂွမ်တီးတုံးက မြန်မာဗွီဒီယိုအခွေတစ်ခွေမှာ သူမကိုစတွေ့ခဲ့တာ။
အားမနာတမ်းပြောရရင်တော့ မည်းမည်းပိန်ပိန်လေးကို ဘာလို့မင်းသမီးညီမနေရာမှာထားသလဲပေါ့ ...?
အဲ ...ဒါပေမဲ့ ခေတ်ရေစီးကြောင်းဆိုတာက အမြဲတမ်းတသွင်သွင်စီးနေတာလေ ...။ လိုက်ပါစီးမျောနိုင်ပါမှ ပစ္စုပ္ပန် ဆိုတာကိုထိတွေ့လို့ရမှာကိုး … ။
အခုတော့ ဖျတ်ကနဲတွေ့လိုက်မိတဲ့ သူမဟာ အရင်ကကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ဖူးတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် နဲ့အကွာကြီးကွာသွားတာကိုတော့ ငြင်းမရပေဘူးလေ ...။
အေးသောင်း အနေနဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအဆက်ပြတ်နေခဲ့တာ ၂၀၁၂ ထဲကဆိုတော့ ငါးနှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့ ....။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီအတောအတွင်း သူမအနေနဲ့ စီးပွားရေးဘက်မှာပဲ အာရုံစိုက်ထားခဲ့တာပါ ....။ ရွှေလွန်းသံ ဆိုတဲ့ပိုးထည်တိုက် ကိုတည်ထောင်ထားပြီး အဲဒီဘက်မှာပဲ အချိန်ကုန်နေခဲ့တဲ့ အေးသောင်း အနေနဲ့ အခုအချိန် အနုပညာလောကကြီးထဲ တစ်ခေါက်ပြန်ဝင်ရောက်လာချိန်မှာတော့ သူမအနေနဲ့ Update ဖြစ်နေတဲ့ အနုပညာလောကထဲ ပြတ်ကျန်ခဲ့သလား စိတ်ပူမိတယ် ....။
Follower သုံးသိန်းကိုးသောင်းကျော်ရှိတဲ့ သူမရဲ့ Page ထဲမယ် အများဆုံးတွေ့ရတာတော့ မြန်မာဆန်ဆန်ရင်ဖုံးလေးတွေ ...၊ ထဘီ နဲ့ အင်္ကျီ ဝမ်းဆက်ရောင်စုံတွေ ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ သူမရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေပါ ....။ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးအဖို့ ကသူ့ကိုယ်ပိုင် Product တွေကို Public ချပြဖို့ဟာ သူ့ရဲ့ Page ထက်ကောင်းတဲ့အရာမရှိဘူးပေါ့။
သူမ အနေနဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ရတော့မှာဖြစ်သလို၊ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ရိုက်ဖို့အတွက်လည်းပြင်ဆင်နေပါပြီ ....။
သီချင်းတွေဆိုဦးမှာလား ... ? နူးနူးညံ့ညံ့အပြုံးလေးတွေကို အွန်လိုင်းစာမျက်နှာတွေနဲ့ တီဗွီပေါ်မှာ ပြန်တွေ့ရတော့မှာလား .... ?
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူမကိုအားပေးတဲ့၊ ချစ်တဲ့ ဖန်တွေအတွက်တော့ဝမ်းသာစရာပဲလေ....။
အေးသောင်းအနေနဲ့ မြန်မာဆန်ဆန်လေးနဲ့ကျတော့ တကယ်ကျက်သရေရှိရှိလေးနဲ့ လှပသွားတာအသေအချာ ....။
အရင်ကလိုမျိုး ကလေးဆန်ဆန်မျက်နှာပေါက်လေးကိုလည်းတစ်ခါတစ်ခါတော့ မြင်ရသေးရဲ့ ...။
ကျစ်ဆံမြီးလေး နှစ်ဖက်ကိုချလို့ ဘလောက်စ်ပန်းရောင်လေးနဲ့ ပုံလေးဟာ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွေဆီပြန်ရောက်သွားသလားအောက်မေ့မိတယ် ...။
လောလောဆယ်တော့ သူမအနေနဲ့ အကြိုက်ဆုံးဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ “ ကြောက် ကြောက် ကြောက်” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ပါတဲ့ ....။
အေးသောင်းရဲ့ လတ်တလောပုံရိပ်လေးတွေ၊ လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကို ရှုစားချင်သပဆိုရင်တော့ဖြင့် https://web.facebook.com/ayewutyi.thaung.1 မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါကြောင်း ကျွန်တော်ဖြင့် သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါရစေ ....။
အော် ..... ကျွန်တော်လည်း အေးသောင်းရဲ့ဖန်တစ်ယောက်ဘာ …။ ချေ့ယူ နော် .....။
အသက် ၁၉ နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ခင်လိူင်သမီးလေး သဇင်ထူးမြင့်
ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဇာတ်ဝင်တေးသီဆိုတဲ့ အသက်အငယ်ဆုံးအဆိုရှင် ဖြစ်လာမယ့် Billie Eilish
တတိယအကြိမ်မြောက် Diamond Ball မှာ တွေ့ရတဲ့ Rihanna ရဲ့ Black Gown Fashion